people Nepal » बाघले बाहिरीआँखा लगिदियो, भित्री खोलिदियो ! बाघले बाहिरीआँखा लगिदियो, भित्री खोलिदियो ! – people Nepal
बाघले बाहिरीआँखा लगिदियो, भित्री खोलिदियो !
काठमाडौं, फागुन ५ – जंगलमा खरखडिया खुलेको थियो । गाउँलेहरु घर बार्ने र छाउने घर काटन् खाता सामुदायिक वनमा पुगेका थिए । सबै गाउँले एकैपटक वन छिरेपछि भदै थारुलाई लाग्यो, गाउँलेहरुले वन त सखाप पार्छन कि क्या हो । मनले नमानेपछि २०६० साल पुस २२ गते खाता सामुदायिक वनको निरीक्षण गर्न थारु वनमा छिर्नुभयो । दिउँसोको १ बजेतिर उहाँलाई बडेमानको पाटेबाघले आक्रमण गर्‍यो । बाघले आक्रमण गर्दा डरले उहाँको मुटुले ठाउँ छाडेको थियो । तर जोश उर्लेर आयो । झण्डै ३ मिनेटसम्म बाघसँग लडाइँ चल्यो । लडाइँकै क्रममा बाघले छाडेर हिँड्यो । सुरुमा त उहाँले जोशका भरमा होस पाउनुभएन ।